कसरी फोटोशपमा रंगहरू उल्टाउने र राम्रो नतीजाहरू पाउने क्रिएटिव अनलाइन
फोटोशप विश्वमा सब भन्दा लोकप्रिय छवि सम्पादन कार्यक्रम हो। धेरै पेशेवरहरूले यसलाई उनीहरूको सिर्जना वा डिजाइनहरू प्रयोग गर्न प्रयोग गर्दछन् र उनीहरूलाई सामान्य छ कि ती सानो चालहरू जुन यो इन्टरफेसले प्रस्ताव गर्दछ भनेर थाहा पाउनुपर्दछ। जहाँसम्म, यदि तपाईं एक नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, वा यदि तपाईं अझै आफैंलाई कार्यक्रमको साथ परिचित गर्दै हुनुहुन्छ भने, केहि ट्रिकहरू जहिले पनि काममा आउँदछन्, जस्तो कि फोटोशपमा रंगहरू उल्टो गर्नुहोस्। के तपाईंलाई थाहा छ त्यो कसरी गर्ने?
अब हामी तपाईलाई कुञ्जीहरू दिँदै छौं, चरण-देखि-चरण, ताकि तपाई सजिलैसँग फोटोशपमा र colors्गहरू उल्टाउन सक्नुहुनेछ। यो धेरै सरल छ, तर कहिलेकाँही यो जटिल हुन्छ किनकि हामी कहाँ खेल्ने भनेर जान्दैनौं। अब देखि तपाइँ तपाइँलाई केहि मिनेट को मामला मा यो कसरी गर्ने सिक्ने समय बचत हुनेछ।
1 फोटोशपमा रंगहरू उल्टाउनुहोस्, यो केको लागि हो?
2 छविमा फोटोशपमा र colors्ग कसरी उल्टाउने
3 तहहरूको साथ रंगहरू उल्टो गर्नुहोस्
4 केवल विशिष्ट भागहरू लगानी गर्नुहोस्
फोटोशपमा रंगहरू उल्टाउनुहोस्, यो केको लागि हो?
यदि तपाईंले पहिले कहिले गर्नुभएन भने, तपाईंसँग किन प्रश्नहरू उठ्नुपर्दछ कि किन तपाईंले त्यसो गर्नुपर्दछ। फोटोशपमा उल्टाउने र colors्गहरूको प्रयोग के हो? तपाईंले जान्नुपर्दछ कि यसले तपाईंको डिजाइनहरू, छविहरू, फोटोहरू, धेरै उत्सुक प्रभाव थप गर्दछ, र तपाईं यसलाई खेल्न सक्नुहुनेछ तपाईंको प्रोजेक्टहरूलाई मौलिक स्पर्श दिन।
के गरेको छ, मोटे तौर मा बोलेको, हो मूल छविमा उल्टो र color्गको तह लागू गर्नुहोस् जुन त्यस छविको दृश्य परिवर्तन गर्दछ, र, केहि केसहरूमा, यसले तल लाइनलाई अझ बढी सुधार गर्दछ।
तसर्थ, यसलाई राम्रोसँग सिक्नुको मतलब तपाईंको प्रोजेक्टहरूलाई विशिष्ट स्पर्श दिनु हो, र तपाईंको ग्राहकहरूलाई केहि यस्तो चीज देखा पर्दैन कि जसले अझ धेरै देखिएको छैन र यसले ठूलो प्रभाव उत्पन्न गर्न सक्छ।
एकचोटि तपाईंले प्रभाव प्रत्यक्ष देख्नुभयो भने, तपाईं ट्वीक गरेर परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, तपाई फिल्टरहरु, शैलीहरु को उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ, बत्तीहरु को छविको भाग प्रतिबिम्बित तरीका। संक्षिप्तमा, नतिजामा मात्र नहुनुहोस् जुन यसले तपाईंलाई "कच्चा" प्रस्ताव गर्दछ, समयको साथसाथै तपाईं अझ राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं अन्य शैलीहरूसँग संयोजनको साथ प्रयोग गर्नुहुन्छ, यसरी तपाईंसँग भएको परियोजनालाई पूर्ण गर्नुहुन्छ। चीजहरू प्रयास गर्न नडराउनुहोस्, तपाईंसँग सँधै अनडू बटन हुन्छ तर, हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं कि तपाईले के गर्नुभयो लेख्नुहोस् ताकि तपाईले के गर्नुभयो भनेर जान्न सक्नुहुनेछ (पछाडि फर्कने मात्र होइन, तर किनभने तपाईले राम्रो पाउनुभयो भने नतिजा, तपाइँ यो गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाइँले यसलाई प्राप्त गर्न के गर्नुभयो याद गर्नुहुन्न)।
छविमा फोटोशपमा र colors्ग कसरी उल्टाउने
केहि सामान्य के साथ शुरू गरौं। फोटोशपले छवि खोल्छ जुन रंग छ। त्यस छविमा र colors्गहरूको उल्टो प्रभाव पार्नको लागि, तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको प्रोग्राम मेनूमा छवि / समायोजन / उल्टोमा जानुहोस्। यदि तपाइँ कुञ्जीपाटी सर्टकटहरू रुचाउनुहुन्छ भने Ctrl थिच्नुहोस् र यसलाई समातेर I कुञ्जीमा थिच्नुहोस्।
सिधा, त्यो फोटोको रंगहरू परिवर्तन हुनेछन्। तर यदि तपाइँको छवि रातो र कालो छ, यसको मतलब यो होइन कि तिनीहरू उल्टो हुनेछन् र के कालो छ अब रातो छ, र रातो अहिले कालो छ। हैन
फोटोशपमा रंगहरू उल्टाउँदै के गर्छ यसले रंग लिन्छ र यसलाई यसको रंगको विपरीतमा बदल्छ। अर्को शब्दहरुमा, र circle्ग सर्कलमा, यो सँधै फोटोमा रंगहरू सर्कलमा सर्कलमा परिवर्तन हुन्छ।
यो फोटोशपमा रंगहरू उल्टाउनको लागि सब भन्दा सरल र सब भन्दा आधारभूत तरीका हो। यो लोगो वा केही चीजको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ जहाँ मास्क वा तहहरू आवश्यक पर्दैन, तर, यदि तिनीहरू तपाईंको प्रोजेक्टमा छन् भने लगानी प्रक्रिया अलि जटिल हुन्छ। हामी यसलाई तल तपाईलाई व्याख्या गर्दछौं।
तहहरूको साथ रंगहरू उल्टो गर्नुहोस्
यदि तपाईं आफ्नो मूल छवि रंग परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्न भने, त्यसपछि यो प्रभाव लागू गर्न उत्तम तरिका एक तह मार्फत हो। यो गर्नका लागि तपाईंले फोटोशपमा छवि खोल्नु पर्छ। अर्को, तह मेनू मा जानुहोस् र एक नयाँ जोड्नुहोस्। यो लेयर प्यानलमा देखा पर्दछ जुन प्राय प्रोग्रामको दायाँ तिर अवस्थित हुन्छ। त्यहाँ तपाईं देख्नुहुनेछ कि यो मूल माथि देखा पर्दछ (वास्तवमा, यदि तपाईं छविबाट लक हटाउनुहुन्छ, तपाईं तल राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने)।
अब तपाईंसँग तह छ, निश्चित गर्नुहोस् कि मूल प्रतिलिपि हाईलाइट गरिएको छ। छवि / समायोजन / उल्टोमा जानुहोस् र यो स्वचालित रूपमा रंगको साथ उल्टो बाहिर आउँछ।
तपाईंसँग छवि हेर्नका लागि दुई तरिकाहरू छन्, एउटा मूल र colorsहरू सहित, र अर्को उल्टो। यसले तपाईंको लागि के गर्न सक्छ? उदाहरण को लागी:
एक छवि बनाउन जुन आधा मूल र re र आधा उल्टो रंग छ।
फिल्टरहरू र शैलीहरूसँग खेल्न दुई छविहरूलाई एकमा यसरी मर्ज गर्नुहोस् कि तपाईं मूल र colors्ग पाउँनुहुन्न न त इन्भर्ट गरिएको तर तपाईले पाउनु भएको तेस्रो र and्ग र डिजाइन जुन अझ बढी आकर्षक हुन सक्छ।
केवल विशिष्ट भागहरू लगानी गर्नुहोस्
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंसँग छवि छ र तपाईं यसको प्रत्येक अंश फरक देखिन चाहनुहुन्छ। उदाहरण को लागी, एक भाग उल्टो र अर्को मूल। यसले दुई तह (मूल र उल्टो) लाई संयोजन गर्ने संकेत गर्दछ, तर यो कसरी भयो?
यो गर्न, पहिलो कुरा तपाईलाई मुख्य लेयर (मूल, उदाहरणका लागि) चयन गर्न आवश्यक पर्दछ। अब तपाईले लगानी गर्न चाहानु भएको भाग औंल्याउनु पर्छ। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईं आयत, धनु वा जादुको कांठिको प्रयोग गर्नुहोस्। यी तीन उपकरणहरू तपाईंले चाहनुभएको प्रभाव प्राप्त गर्नका लागि उत्तम छन्।
एक पटक तपाईंसँग यो भएपछि, तपाईंले भर्खर फोटोको त्यो अंश मेटाउनुपर्नेछ र, यदि अर्को लेयर देखियो भने तपाईंले सम्भवतः तुरून्त प्रभाव देख्नुहुनेछ।
तर के हुन्छ यदि तपाईंलाई यो मनपर्दैन? के तपाई पछाडि फर्कंदैन भन्ने मतलब हुनुहुन्छ? वास्तवमा होईन, तपाईं जहिले पनि सम्पादन / अन्डुमा जान सक्नुहुन्छ र तपाईंमा पूरै छवि फेरि हुनेछ, मानौं तपाईंले यो कहिल्यै काट्नु भएको थिएन। यस तरिकाले, तपाईले आफूले चाहे जति पटक प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, र फोटो पनि बिभिन्न आयतहरूमा विभाजन गरिएको छ जसले छविलाई (वा यसको अंश) विविध टोनसहित देखाउँदछ, जसले अझ धेरै हडताल दृश्य प्रभाव सिर्जना गर्दछ।
डिजाइनमा, कि त फोटोशप वा अन्य छवि सम्पादन कार्यक्रमको साथ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रयास गर्नु हो। कहिलेकाँही, त्यहाँ निम्न ट्यूटोरियलहरू मात्र होइन, तर तपाईले एकचोटि सिक्नु भएपछि, तपाईले केहि परिवर्तन गर्नुभयो भने के हुन्छ भनेर जाँच्नको लागि आफैलाई सुरुवात गर्नुपर्दछ, वा छविहरूको उपचारका अन्य तरिकाहरूका साथ।
र एउटा कुरा याद राख्नुहोस् कि फोटोशपमा गरिएको सबै चीजहरू अन्य छवि सम्पादकहरूमा पनि गर्न सकिन्छ। तपाईलाई यो जान्नुपर्दछ कि यी प्रोग्राममा जस्तै समान प्रभाव उत्पन्न गर्न लागू गर्नका निम्ति कुन आदेशहरू छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » फोटोशपमा कसरी र in्गहरू उल्टाउने
इलस्ट्रेटरको साथ छवि क्रप गर्नुहोस्